U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts
Ikhaya AMAZINGA AFRIKA U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts
Kwangathi 1, 2017
I-LB inikeza iNdaba ephelele ye-football ikhono elikwaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Auba'. I-Aubameyang Intsha Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pitch amaqiniso amancane awaziwa ngaye. Lets Begin.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukuphila Kwengane Ekuqaleni
UPierre-Emerick Emiliano François Aubameyang wazalelwa eLaval, eFrance ngo-18th kaJuni 1989 ngobaba wakhe waseGabona, uMnuz Pierre François Aubameyang "Yaya", owayengummeli waseBabon ne-Spanish, uNksz Margarita Crespo Aubameyang, umnikazi webhizinisi / ibhizinisi owesifazane.
U-Aubameyang uyingxenye yesiqingatha obani abelana ngezakhamuzi zaseFrance naseGabon. Ngokungangabazeki, umbono wakhe womxube ohlangene ubonakala ngokucacile esikhunjeni sakhe somnqumo. Wena akazange asebenzise impilo yakhe yobuntwana eFrance neGabon ngenkathi ekhula. Wakhulela eMilan, e-Italy lapho ubaba wakhe esebenza khona njengomdlali we-AC Milan.
UPierre-Emerick Aubameyang wayeyindodana enhle kakhulu. Wayejabulela ukuhlangenwe nakho okufanelekayo kwezingane, okuyiminyaka eminingi eyayiyilangazelela. Ukuba nebaba owayengumdlali odlala eqenjini elibhekene ne-football scout kwelinye leqembu elikhulu kunawo wonke emhlabeni kwakusho ukuthi kunenzuzo ku-Auba.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Ubaba wakhe (okufanekisiwe ngezansi) wayebhekene nokuthuthukisa nokuhlola i-Auba football talent. Njengomphathi omkhulu we-AC Millan nomuntu onethonya ngokuxhumana okujulile ebhola, ukulungisa indodana yakhe ye-3 nabasebenzi bakhe ngokuqinisekile, kwakungeyona into enzima.
UPierre-Emerick Aubameyang nabazali -Ukuphila Komndeni
Kufanelekile ukukhuluma ukuthi uMnu Pierre François Aubameyang owaziwa ngokuthi "Yaya" wayengomunye wabavikeli abakhulu be-Afrika ngesikhathi sakhe esivela ku-1982 kuya ku-2002. Wasiza kakhulu ithimba lamazwe aseGabana ku-1994 ne-1996 African Cup of Nations futhi wadlala amathimba amaningi eFrance. Amaphupho akhe ayelokhu ekhulisa amadodana azoqhubeka nefa le-Aubameyang.
NjengoBaba Ofana Nendodana- I-Aubameyangs
Umama ka-Aubameyang- Margarita
Akhe umama, UNkk Margarita Crespo Aubameyang Ngakolunye uhlangothi kuye kwasekela izinqumo zomyeni wakhe ukuba indodana yakhe ibambelele emlandweni. Ungowesifazane waseFrance ovela eSpanishi.
Okubalulekile ukuba uqaphele ukuthi igazi laseSpain libuye lishaye ngemisipha ye-Auba. Idolobha likamama ka-El Barraco (elisentshonalanga yeMadrid) uye wakhiqiza izinhlamvu eziningi zezinyawo eminyakeni eminingi.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ungumuntu Womndeni
Ukusuka eqenjini, u-Auba ', kuthiwa ungumndeni ophelele othanda ukuchitha isikhathi nentombi yakhe u-Alysha nendodana, Curtys ozinikezela ngayo uSpiderman nemikhosi ye-batman.
Ngokusho kuka-Auba "Uthando luyinto enhle kuzo zonke izimo zalo, kodwa, mhlawumbe, ukuhlukahluka okuthinta kakhulu futhi okungaqondakali kothando kuthinta u-Alysha noCharty"
"Unginike amandla angempela," kusho ubaba ozikhukhumezayo, obhekene nezikhathi eziningi ezithwale igama lendodana yakhe "Curtys".
Ngamazwi akhe, "I-superhero ekhaya kuphela yindodana yami uChartys futhi bobabili sibuka uBatman noSpiderman kuyi-TV ngezikhathi ezithile"
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Umfowethu webhola
Unabafowabo ababili abadala abaqeqeshi bezemidlalo. Empeleni, bobabili baqala imisebenzi yabo e-AC Milan.
Yini ongayazi ngo-Aubameyang Brothers
Ngenkathi uPerre-Emerick esehlume, amanye asemzabalazweni ukuthola ukuhlonishwa komhlaba wonke. Umfowabo omdala uCatilina naye ungumhlaba waseGabon, owenziwe ngobuningi phakathi kwe-2000s, kanti uWilly ungumhlaba wonke kodwa manje udlala eqenjini eliphansi laseJalimane.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Umfana kababa
Ngokungafani nabafowabo, u-Auba uyintandokazi kayise. Akagcini nje ngokumhlonipha kodwa ulandela iseluleko sakhe ezindabeni zebhizinisi nezomndeni.
Ngokusho kwebhizinisi, izinqumo zeBhola ezithinta izingxoxo zokudlulisela kanye nokukhetha kwamaqembu aphethwe ngubaba wakhe omkhulu. Wena, izinqumo ezenziwe kuze kube manje ziye zaphumelela. Ngokwesibonelo, kwakukhona isikhathi uSt. Etienne efuna ukuthengisa u-Auba eNewcastle. Ubaba wakhe wenqaba futhi wenza indodana yakhe ivumelane noDortmund ukudluliselwa. Ngokusho kuka-Auba, "Saba ngumdlali we-Champions League ngoba ubaba wafunda umdlalo weDurgmund kaJurgen Klopp, nakuba imali yayingaphansi."
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -I-Speed ​​Perfect
Ukuhamba kuyinto ecacile ukuthi uzozihlanganisa noPierre-Emerick Aubameyang. Amandla akhe amakhulu kakhulu. Uyashesha ngokusheshisa okufushane futhi okude futhi angaphatha kahle ibhola ngesikhathi esifanayo. Uvuliwe emamitha angu-30 kumasekhondi angu-3.7. Lokhu kuthiwa kuyashesha kuneqhawe lomhlaba we-World Olympic 100 nomnikazi werekhodi lomhlaba- Usain Bolt.
Noma kunjalo, ubelokhu enselele emncintiswaneni wamamitha we-100 ngu-sprinter waseJalimane uJulian Reus kodwa engakamukeli inselele.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Umsebenzi Wokuqala
Ku-2007, wabhalwa kulo AC Milan i-academy ngubaba wakhe, ngonyaka weziqhwaga zase-Italy zaba yi-European Championship. Akakaze adlale umdlalo weRossoneri futhi akakwazanga ukuzimisela njengomdlali weqembu lokuqala. Esikhundleni salokho, wabhalwa ngamakilabhu amaFulentshi afana noDijon, uLille noMonaco. Ngo-2011, wasayinwa ngokugcwele nguSt. Etienne lapho ehola khona imigomo ye-31 futhi wabizwa ngokuthi yiLigue 1 African Player wonyaka we-2012.
Wayenomhlangano wokushintsha umsebenzi wakhe nomqeqeshi uSte-Etienne uChristophe Galtier. Ngokomqeqeshi waseFrance,
"Nakuba akuyona yonke into eyahamba phambili ngo-Auba ekuqaleni. Ngibona into eyodwa kuye. Yisisindo sakhe. Ngibone ngesikhathi sokuqeqeshwa ukuthi wayengumdlali webhola eliphuthumayo engikaze ngathola., "
Lapho eneminyaka engu-20, u-Pierre wadlala iqembu lesiFulentshi U-21 ngemuva kokubizelwa ohlangothini lwe-Italy U-19. Wathuthela eBurussia Dortmond eJalimane e-2013 futhi sekuvele omunye wabadlali abakhulu eBundesliga. Ujoyine i-BVB embikweni we-13 wezigidi ezibikiwe.
Nakuba uPeter wayezalwa eFrance futhi edlala eGabon njengomphathi wokuzama ukuqhubeka nomndeni webhola le-Aubameyang, umfowabo omdala uCatalina. Uyathokozisa futhi uhlonishwa ukuthi izingane zakhe zifuna ukuzilingisa.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ukwenza Umlando
U-Aubameyang ungumdlali wokuqala wokuqala waseGabon ukuthi adlale e-Bundesliga noma kunoma yimuphi umhlangano weJalimane. Wenza uqale ngo-Agasti 10, 2013 ngemuva kokujoyina iDortmund ngoJulayi walolo nyaka. Ube nomdlalo wokuqala wephupho ngokushaya amagoli emdlalweni wakhe wokuqala, owadlalwa ne FC FCs.
Futhi ezincwadini zomlando, NgoJulayi 2012, u-Aubameyang waya eLondon ukumela iGabon emidlalweni yama-Olympic. Emdlalweni wokuqala ngokumelene neSwitzerland wahola umgomo kuphela womdlalo, okuzophela ukuphela kwegoli laseGabon elizokwenza umncintiswano kulo mqhudelwano. Lokhu kwakunguGeorge wokuqala nokuphela komgomo owawuthola kuma-Olympics. Ngemuva kokushaya imigomo ye-19, u-Pierre-Emerick Aubameyang ungumdlali omkhulu kunabo bonke eGabon.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Cars
Njengoba kunikezwe isivinini sezwe saseGabon ngesivinini, kuyinto engokwemvelo ukuthi kufanele ajabulele ukuphila endleleni okusheshayo nayo.
Uthando luka-Aubameyang lwezimoto zakudala
"Kumnandi ukuba nezimoto ezinjengalezi," uthi ngeWalorghini Aventador yakhe yakhelwe. Inombolo yeqembu le-Aubameyang ingatholakala ngisho namathayi emoto yakhe, nakuba manje iqhuba i-Lamborghini.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Wonder Boots
Uvame ukubizwa ngokuthi uMnu Glamorous. U-Aubameyang akuyona umdlali wakho ojwayelekile nganoma yisiphi isici sokucabanga, ikakhulu uma kuziwa ezitheni.
U-Pierre-Emerick Aubameyang amabhuzu amancane
NgoDisemba 2012, wayegqoke izikhumba ezinamakhekhe angaphezu kwe-4,000 Swarovski kanye nomklamo ohlanganisa igama lakhe, inombolo kanye namaqembu akhe ama-crest nemibala ngenkathi eshisa ngokumelana no-Olympique Lyonnais.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ucabanga ukuthi ngu-SPIDERMAN
U-Aubameyang unolwazi oludlule uma kuziwa emikhosini ye-superhero. Lokhu kuhlonipha ku-Spiderman kuphefumulelwe yindodana yakhe uContys ovame ukuhlala emasimini ukubuka ibhola lakhe lidlala ibhola. U-Aubameyang wabonisa ukugubha indodana yakhe ngemuva kokufaka amagoli eDortmund ku-2014 Supercup eBayern.
Imikhosi kaPerre-Emerick Aubameyang Spiderman
Indodana yakhe ingumfana omkhulu wama-heroic book hero futhi uthanda ukuvela esitokisini sikaSpiderman njengoyise.
Imikhosi ye-Spiderman Goal ye-Auba
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ucabanga ukuthi unguBATMAN
Uma engakwazi ukuthola izinto zakhe ze-Spiderman, uphendukela ku-Batman.
I-Auba ye-Batman Celebration
U-Auba ungumdlali we-mega we-Batman. Uhlale engumuntu kuyo yonke imihlangano yamahlaya egqoke isigqoko saseBatman ngendodana yakhe. Lokhu kugcina abaningi besaba kakhulu kukhathazeka ne Knight Dark.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Ulungele ukugqoka iMask ngesikhathi sokugubha
U-Auba uphinde wahlawuliswa ngokugqoka i-mask ehlinzekwa nge-Nike ngesikhathi sokugubha.
I-Auba yamaMask Celebration
Inhlawulo yayihlelwe ngamahemuhemu ukuba abe ngu-€ 50,000. Kamuva kwaqinisekiswa ukuthi le mask yazinikezelwa ezinqoleni ze-Nike Hypervenom Phantom "Strike Night" ayezigqoke.
UDortmund, isikhulu esiphezulu uHans-Joachim Watzke utshele umagazini kaKicker: 'Ngeke kube yilokho i-Nike eyayilinga ukususa izithakazelo zezomnotho ngale ndlela.'
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Uthando lwe-Afrika
I-Auba ye-tatoo yase-Afrika ihlobisa umzimba wayo iphinde ithuthukise umphefumulo wayo ngothando ngezwekazi.
Yebo ungumAfrika, hhayi ngenxa yokuthi wazalwa engumAfrika, kodwa ngoba i-Afrika yazalwa kuye.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Uthanda ibhola kuphela
Yebo ugqoke izicathulo ze-Crystal, ama-masks e-Spiderman, ama-caps ase-Batman - ekuboneni kokuqala. Ngaphandle kokungabaza, i-Auba iyinhlobo ekhethekile yomdanso webhola.
Uma uhlolisisa, uzobona ukuthi lowo ohlaselayo akubona ukuthi ucabanga ukuthi ungubani ngaphandle kwezemidlalo. Ngokusho umngane wakhe omkhulu uChristophe Jallet,
"U-Aubameyang ungumfana othulile, ongahambeli amakilabhu ebusuku, akaphuzi utshwala futhi njalo amaphupho ngebhola".
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Isitayela Somusa
U-Auba uyakhathazeka kakhulu ngezinwele zakhe. Ungomunye wabadlali bebhola abadlali abanobugebengu abaye bahlupha insimu kaPaul Pogba. UPierre-Emerick Aubameyang usememezele uPaul Pogba - hhayi emgqeni, kodwa ngegeyimu yakhe.
Umnikazi wekhanda elihle kunazo zonke e-Football
Unezinwele zokudala phakathi kwama-footballers.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -I-Summersault Master
U-Miroslav Klose wayevame ukukwenza, manje u-Aubameyang wenza kanjalo. I-somersaults yayo. UPierre-Emerick u-Aubameyang utshele Ezemidlalo Bild uyazi ukuthi imikhosi yakhe ye-somersault ikhona "Akuyona ingozi" ngemuva kokunconywa ukuba bayeke yiGoli leBotswana ibanga kanye nochwepheshe bezokwelapha.
Auba- The Master Somersault
Eqinisweni, u-Auba unquma ngokuzenzekelayo ngemuva komgomo ngamunye ukuthi uyaziqeda yini noma awukwenzeki, kodwa uzama ukwenza kanjalo ngemuva kwezinselele ezibalulekile.
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -Inhlonipho yeCrespo
Ayikho i-footballer emhlabeni oye wafaka igama lomunye umdlali wezinyawo ezandleni zakhe. I-Auba ihlukile kulokhu.
I-Tatoo ye-Auba yeCrespo
Uphethe isithombe sakhe, lowo umqhubi wase-Argentina "Hernan Crespo" engxenyeni yakhe yesokunxele. Imibiko ibonisa ukuthi U-Hernan Crespo uhlobene nomama wakhe ophethe igama. U-Aubameyang ungumdlali ozivumelanako weHernan Crespo futhi umbiza ngokuthi uyisibonelo sakhe esikhulu kunazo zonke emdlalweni.
Ngokusho kuka-Auba, "uCrespo unamandla, unamandla emoyeni, ngokusemthethweni-enekhono futhi kunesidingo somdlali," etshela umqaphi. U-Auba uchitha izikhathi eziningi zokuqeqeshwa kwakhe ngemuva kokubuka amakhono e-poaching e-crespo.
Ngokusho kukaAuba, "I-Crespo yizincazelo zePoacher. Akavami ukubandakanya ekwakheni futhi angabonisi isithakazelo esikhulu ekuhambeni kwemigqa yokuzivikela. Uhamba kancane kancane ngaphandle kwebhokisi. Kodwa ngaphakathi ebhokisini, uyakwazi ukuhamba. Uyazi lapho amabhola wesibili azophela khona. Uyazi ukuthi angasebenzisa kanjani isikhala esincane esincane esisele ebhokisini le-6 yd. Ngifunda nsuku zonke ukuba ngibe naye. "
U-Pierre-Emerick Aubameyang Incwadi Yobuntwana I-Untold Biography Facts -I-LifeBogger Rankings
Sivumelanise izibalo zethu ezithandwa uPeter-Emmerick Aubameyang.
I-Gabonese Football Diary
UMarco Reus Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts